EVY's Kitchen: Chicken Feet Salad
Posted by Evy at 11:25 AM
အရမ်းကြိုက်တယ်။ ဆိုင်ကဝယ်စားရင် ဘာမှမပါဘဲနဲ့ ဈေးကြီးတယ်နော်။ ဒီပိတ်ရက် လုပ်စားဖြစ်ရင်တင်လိုက်မယ် :)
ဟုတ်တယ် ဆိုင်မှာကဈေးကြီးတယ်။ ပိုတော့ ကောင်းတာပေါ့။ အိမ်မှလုပ်တာလည်း ဆိုင်ကိုမမှီပေမယ့် စားလို့ကောင်းပါတယ်။
I like chicken feet too. but don't know how to remove the skin from bone.. now I am going to try this. Thanks, evy.
Thank you so much sis, and do you know how to cook spicy and sour chicken feet soup?